ယေရှုအပေါ် ကိုးကားချက်များ - ယေရှုဟာ ဘုရားလား? စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဒီအဆိုများကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
သခင်ယေရှု ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အခြားလူများက အသေအချာ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရှင်ပေါလု - “ ( ယေရှု ) ခရစ်တော်ဟာ မမြင်တွေ့နိုင်သောဘုရားရဲ့ မြင်တွေ့နိုင်သောပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။”၁
ရှင်ယောဟန် - “( ယေရှု) သူဟာ အစကနဦးကပင် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။”၂
ရှင်ပေတရု - “( ယေရှု) ခရစ်တော်ကို သင့်အသက်တာရဲ့ဘုရားသခင်အဖြစ် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရပါမယ်။”၃
ဒါဆို ယေရှုက သူ့အကြောင်း ဘာပြောခဲ့ပါသလဲ?
သူ့ကိုယ့်သူ ဘုရားအဖြစ် ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါသလား? သမ္မာကျမ်းစာအရ.. သိပ်ကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တာပေါ့! အောက်မှာ သူူ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်တွေရှိပါတယ်။
ယေရှုဟာ ဘုရားလား? ယေရှုအပေါ်ကိုးကားချက်များ - သူဟာ ဘုရားနဲ့တန်းတူဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ်တော်တိုင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“သင်၏အသက်သည် အနှစ်ငါးဆယ်မျှမရှိဘဲလျက် သင်သည် အာဗြဟံကို မြင်လေပြီတကား။” လို့ လူတွေ ပြောကြတဲ့အခါမှာ ယေရှုက “ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ အာဗြဟံမဖြစ်မှီ ငါဖြစ်၏!” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။၄
“ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်တော်မူ၏။” လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။
တစ်ဖန် လူတွေက သူ့ကိုကျောက်ခဲနဲ့ပေါက်သတ်ဖို့ လုပ်ကြပြန်တယ်။
ယေရှုက “ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့် ကောင်းသောအမှုအများတို့ကို သင်တို့အားပြပြီ။ ထိုအမှုတို့တွင် အဘယ်မည်သောအမှုကြောင့် ငါ့ကိုခဲနှင့်ပစ်ကြမည်နည်း?” လို့ မေးပါတယ်။
အဲဒီအခါ သူတို့က “ကောင်းသောအမှုကြောင့် ခဲနှင့်ပစ်မည်မဟုတ်။ သင်သည် လူဖြစ်လျက်ပင် ဘုရားသခင်ဖြစ်ယောင်ဆောင်၍ ဘုရားသခင်ကိုလွန်ကျူးသောစကားကြောင့် ခဲနှင့်ပစ်မည်။” လို့ ဆိုကြပါတယ်။၅
ယေရှုက “ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် ငါ့ကိုသာယုံကြည်သည်မဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကို ယုံကြည်၏။ ငါ့ကိုကြည့်မြင်သောသူသည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကို ကြည့်မြင်၏။ ငါ့ကိုယုံကြည် သမျှသောသူတို့သည် မှောင်မိုက်၌မနေစေခြင်းငှာ ငါသည်အလင်းဖြစ်လျက် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီ။” လို့ လူအပေါင်းတို့ကို ကြွေးကြော်ပြီး မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။၆
“သင်တို့သည်ငါ့ကို အရှင်ဘုရားဟူ၍၎င်း၊ သခင်ဟူ၍၎င်း ခေါ်တတ်ကြ၏။ ထိုစကားလည်း ဟုတ်မှန်သောစကား ဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ခေါ်ကြသည်အတိုင်း ငါမှန်၏။”၇
“ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။”
ယေရှုက “ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ။ သင်တို့သည်ငါ့ကိုသိလျှင် ငါ့ခမည်းတော်ကိုမသိဘဲ မနေရကြ။ ယခုမှစ၍ ခမည်းတော်ကိုသိမြင်ကြ၏!” လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။
“ဖိလိပ္ပုကလည်း၊ သခင်၊ ခမည်းတော်ကို အကျွနု်ပ်တို့အားပြတော်မူပါ။ ထိုသို့ပြတော်မူလျှင် အကျွနု်ပ်တို့ အလိုပြည့်စုံပါမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊ ယေရှုက၊ ဖိလိပ္ပု၊ ဤမျှကာလပတ်လုံး ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိပြီးမှ သင်သည်ငါ့ကိုမသိသေးသလော။ ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ကိုမြင်၏။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ ခမည်းတော်ကို အကျွနု်ပ်တို့အား ပြတော်မူပါဟု သင်သည်အဘယ်သို့ဆိုရသနည်း?”၈
ယေရှုဟာ ဘုရားလား? ယေရှုအပေါ်ကိုးကားချက်များ - ယေရှုမိမိကိုယ်မိမိသရုုပ်ဖော်ပုံ
ယေရှုက “ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ မောရှေသည် ကောင်းကင်မုန့်ကို သင်တို့အား မပေး။ ခမည်းတော်သည် မှန်သောကောင်းကင်မုန့်ကို သင်တို့အား ပေးတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏မုန့်မူကား၊ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်၍ လောကီသားတို့အား အသက်ကိုပေးသောမုန့်ပေတည်း။” လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ သူတို့က “သခင်၊ ထိုမုန့်ကို အကျွနု်ပ်တို့အား အစဉ်မပြတ်ပေးတော်မူပါ”လို့လျှောက်ကြပါတယ်။
ယေရှုကလည်း “ငါသည် အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ ငါ့ထံသို့လာသောသူသည် နောက်တဖန် အဆာအမွတ်မခံရ။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် နောက်တဖန် ရေငတ်မခံရ။” လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။၉
“ငါသည် ဤလောက၏ အလင်းဖြစ်၏”
“တဖန်တုံ ယေရှုက၊ ငါသည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏။ ငါ့နောက်သို့လိုက်သောသူသည် မှောင်မိုက်၌ မသွားမလာ၊ အသက်၏အလင်းကို ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”၁၀
“ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနားထောင်၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ထိုသိုးတို့ကို ငါသိ၏ ။ ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့လက်မှ မနှုတ်မယူရာ။”၁၁
အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် သေခြင်းအတွက် တရားစီရင်သူ
“ခမည်းတော်သည် သေလွန်သောသူတို့ကို ထမြောက်ရှင်ပြန်စေတော်မူသကဲ့သို့၊ ထိုနည်းတူ သားတော်သည်လည်း အလိုရှိသမျှသောသူတို့ကို ရှင်စေ၏။ လူအပေါင်းတို့သည် ခမည်းတော်ကို ရိုသေသည် နည်းတူ၊ သားတော်ကိုရိုသေစေမည်အကြောင်း၊ ခမည်းတော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ တရားစီရင်တော်မမူ။ တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှကို သားတော်အား အပ်ပေးတော်မူ၏။ သားတော်ကို မရိုသေသောသူသည်ကား၊ သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကို မရိုသေသောသူဖြစ်၏။”၁၂
“လူသားသည် မြေကြီးပေါ်မှာ အပြစ်လွှတ်ပိုင်သည်ကို သင်တို့သိစေခြင်းငှာ၊ ထလော့၊ ကိုယ်အိပ်ယာရာကို ဆောင်၍ ကိုယ်အိမ်သို့သွားလော့ဟု လက်ခြေသေသောသူအား မိန့်တော်မူ၏။ ထိုသူသည်လည်း ထ၍ မိမိအိမ်သို့သွားလေ၏။ လူအစုအဝေးတို့သည် မြင်လျှင် အံ့သြခြင်းရှိ၍၊ လူတို့အား ဤသို့သောအခွင့်ကို အပ်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြ၏။”၁၃
“ယေရှုကလည်း သင်တို့သည် အောက်သားဖြစ်ကြ၏။ ငါမူကား အထက်သားဖြစ်၏။ သင်တို့သည် လောကီသားဖြစ်ကြ၏။ ငါမူကား လောကီသားမဟုတ်။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ကိုယ်အပြစ်၌သေကြလိမ့်မည် ဟု ငါဆို၏။ ငါသည် ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကို သင်တို့သည်မယုံလျှင်၊ ကိုယ်အပြစ်၌သေကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”၁၄
ယေရှုဟာ ဘုရားလား? ယေရှုအပေါ်ကိုးကားချက်များ - ဒီလောကကိုလာရခြင်းအကြောင်းအရင်း သူ့ရဲ့ပြောပြချက်
“.. ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက်လွတ်ရုံမျှမက အထူးသဖြင့် အသက်ဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ လာသတည်း။ ငါသည် ကောင်းသောသိုးထိန်းလည်းဖြစ်၏။ ကောင်းသောသိုးထိန်းသည် သိုးတို့အဖို့အလိုငှာ မိမိအသက်ကို စွန့်တတ်၏။... ငါသည် ကောင်းသောသိုးထိန်းဖြစ်၏။ ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုသိတော်မူ၍၊ ငါသည်လည်း ခမည်းတော်ကိုသိသကဲ့သို့ ငါ၏သိုးတို့ကို ငါသိ၏။ ငါ့သိုးတို့သည်လည်း ငါ့ကိုသိကြ၏။ ငါသည် ကိုယ်အသက်ကို သိုးတို့အဖို့အလိုငှာ စွန့်၏။”၁၅
“လူသားသည် ဆိုးသောသူတို့လက်သို့ အပ်နှံခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေသတ်ခြင်းကို ခံရမည်၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်။”၁၆
ကျွနု်ပ်တို့ကို ကယ်တင်ရန်၊ ကျွနု်ပ်တို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးရန်
“ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီ သားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။ လောကီသားတို့အား အပြစ်စီရင်ခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသည် မဟုတ်။ လောကီသားတို့သည် ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း စေလွှတ်တော်မူ၏။ သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို မခံရ။ မယုံကြည်သောသူမူကား၊ ဘုရားသခင်၌ တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို မယုံကြည်သောကြောင့် ယခုပင် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရ၏။”၁၇
“(ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကား) သားတော်ကိုကြည့်မြင်၍ ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် ထာဝရအသက် ကို ရစေခြင်းငှာ၎င်း အလိုတော်ရှိ၏။ ငါသည်လည်း နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထိုသူတို့ကို ထမြောက်စေမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”၁၈
“... ငါ့ကိုချစ်သောသူကို ငါ့ခမည်းတော်သည် ချစ်တော်မူမည်။ ငါသည်လည်း ထိုသူကိုချစ်၍ သူ့အားကိုယ်တိုင် ထင်ရှားမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။... ငါ့ကိုချစ်သောသူသည် ငါ့စကားကို နားထောင်လိမ့်မည်။ ငါ့ခမည်းတော်သည် ထိုသူကို ချစ်တော်မူသည်။ ငါတို့သည်လည်း သူ့ဆီသို့ကြွ၍ နေရာချမည်။”၁၉
(၁) ကောလောသဲ ၁း၁၅ (၂) ရှင်ယောဟန် ၁း၂ (၃) ပေတရု ပ-စောင် ၃း၁၅ (၄) ရှင်ယောဟန် ၈း၅၆-၅၈ (၅) ရှင်ယောဟန် ၁ဝး၃၀-၃၃ (၆) ရှင်ယောဟန် ၁၂း၄၄-၄၆ (၇) ရှင်ယောဟန် ၁၃း၁၃ (၈) ရှင်ယောဟန် ၁၄း၆-၉ (၉) ရှင်ယောဟန် ၆း၃၂-၃၅ (၁၀) ရှင်ယောဟန် ၈း၁၂ (၁၁) ရှင်ယောဟန် ၁ဝး၂၇-၂၈ (၁၂) ရှင်ယောဟန် ၅း၂၂-၂၃ (၁၃) ရှင်မဿဲ ၉း၆-၈ (၁၄) ရှင်ယောဟန် ၈း၂၃-၂၄ (၁၅) ရှင်ယောဟန် ၁ဝး၁၀-၁၁၊ ၁၄-၁၅ (၁၆) ရှင်မာကု ၉း၃၁ (၁၇) ရှင်ယောဟန် ၃း၁၆-၁၈ (၁၈) ရှင်ယောဟန် ၆း၄၀ (၁၉) ရှင်ယောဟန် ၁၄း၂၁-၂၃